गोल्ड मेडलिष्ट राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना भन्छिन् : पुरुष भन्दा महिला कमजोर हुदैनन् | Sunaulo Nepal
काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैकंको इतिहासमा डा. निलम ढुगांना पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर हुन् । वि.स.२०५४ मङसीर २२ गते सहायक अधिकृतको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैकंको सेवामा प्रवेश गरेकी ढुगांनालाई त्यसपछि कहिल्यै पछाडी फर्केर हेर्नुपरेन। एकपछि अर्को अर्को सफलताका सिढीहरु चढ्दै गरेकी उनलाई ०७५ साल फागुन २५ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरीषद बैठकले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्यो । पढाईमा सधैँ अब्बल र मेहनती डा. ढुगांना डेपुटी मात्र हैन पहिलो महिला गर्भनर बनेर अर्को इतिहास लेख्ने स्वर्णिम अवसरको पर्खाइमा समेत छन्। महिला भएर मात्र हैन हरेक प्रतिस्पर्धामा सबैलाई उछिनेर डेपुटी गर्भनर बनेकी उनका जीवनका भोगाई तिनका अनुभव उतार चढाव सफलता लगायत जीवनका अनेकपाटाका बिषयमा सुनौलो नेपालका लागी पार्वती पाण्डेयले उनकै कार्यकक्षमा भेटेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपालकै पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर बनेर कार्यभार सम्हाल्दा कस्तो लाग्यो के सम्झिनुभयो ?
मैले मेहेनत गरेको थिए र मेहेनत अनुसार नै फल पाए त्यसमा पनि पहिलो महिला डेपुटी गभर्नरको रुपमा चिनिन पाउँदा खुसी पनि लागेको थियो । तर त्यो भन्दा बढी आफ्नो जिम्मेवारीलाई सम्झिए ।
संघर्षका सुरुवाति दिनहरुलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
निश्चय नै सहज थिएन । महिला भएको काराण्ले दोहोरो जिम्मेवारी हुने । परीवार छोराछोरी हेर्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने, र यता राष्ट्र बैकंको जागिर पनि गर्नुपर्ने सहज त थिएन त्यो मेहनतको फल चाहि अहिले पाए जस्तो लाग्छ ।
एउटा महिला भएर यो सफलता चुम्न कत्तिको सघंर्ष गर्नुपर्यो ?
मेरो बुवा जिल्ला शिक्षा कार्यलय झापामा कार्यकरत हुनुहुन्थ्यो अनि आमा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो त्यसैले हामीलाई पढन समस्या भएन । घरमा गाईपालेका थियौं घरको काम सबै गर्थे, घास काट्ने, कुढो पकाउने, घर सरसफाई खाना बनाउने लगाएतका सवै कामहरु गर्थे । मैले सरकारी स्कुलमै पढेको हो । अग्रेजी राम्रो थिएन पछि सिकेर सुधारेको हो । अलिअलि थिए । त्यसमा पनि धेरैले पढाईलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । कोही फेल हुन्थे र पढ्न छोडदिन्थे भने कोहीको सानै उमेरमा बिहे हुन्थ्यो बिहे पछि उनिहरुले पढेको जसतो मलाइृ लाग्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैकंमा जागिर खाने सोच कसरी आयो ?
म यहाँ जागिरमा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि मैले पोष्ट ग्राजुयट क्याम्पस विराटनगरमा एकाउण्ट विषय पढाउथे । मेरो श्रीमानले पनि अर्थशाश्त्र षिय पढाउनुहुथ्यो उहाँका विद्यार्थीहरुले हजुरले त नेपाल राष्ट्र बैकंमा जागिर खानुपर्छ यहाँ भन्दा हजुरलाई त्यहाँ राम्रो छ भनेर मलाइ प्रोत्साहन गर्नुभयो अनि उहाँहरुले नै मलाइ नेपाल राष्ट्र बैकंको फारम पनि किनेर ल्याईदिनुभयो ।
मलाई उहाँहरुले त्यति सम्म सहयोग गर्नुभयो । फारम पनि उहाँहरुले आफै किनेर ल्याईदिएपछि त मैले किन नभर्ने भनेर मैले फारम भरे जाँच दिनका लागि काठमाडौं पनि आईयो, काठमाडौं आईसकेपछि हाम्रो जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको अगाडी एउटा सुचना टासेको रैछ अहिले सरकार परीवर्तन भएकोले अहिलेलाई परीक्षा स्थगित भयो भनेर अनि म आफन्तकोमा वस्न भनेर जावलाखेल जानका लागि रत्नपार्कमा गएकी थिए त्यहाँको पेटीमा कितावहरु वेच्न राखेको रैछ अनि नेपाल राष्ट्र बैकं प्रतियोगिता गाईड लेखेको किताब किनेर लगे त्यो पढेपछि थाहा भने मैले तयारी गर्नुपर्ने धेरै रैछ भनेर अनि त्यतिवेलाको परीक्षा स्थगित हुन मेरो लागि राम्रो भयो । एक वर्ष तयारी राम्रो गर्न पाए ।
विहान क्याम्पस पढाउन जान्थे, दिउसोमा पढथे । एकाउण्ट शिक्षक भएकोले अन्य क्याम्पसमा पनि पार्ट टाईम मात्रै भएपनि पढाईदिन भनेर माग हुन्थ्यो र पार्ट टाईम पढाए पनि । यसरी नै एक वर्ष बित्यो अनि जाँच दिन काठमाडौं आए जाचँ दिए एकैचोटीमा नाम निस्क्यो । यसरी २०५४ सालमा म नेपाल राष्ट्र बैकंमा प्रवेश गरें ।
घरको सबै व्यवस्था मिलाएर अगाडी बढ्न कत्तिको सहज भयो ?
घरपरिवारको साथ सहयोग भएर घर परीवारले हेर्दियो भने गाह्रो हुदैन । चुनौतिपुर्ण त अवह्य छ । सयुक्त परीवारमा वस्नु परेन श्रीमानले सधै राम्रो सहयोग गर्नुहुन्थ्यो, श्रीमतीको उन्नती प्रगतिमा उहाँले सधै सकारात्मक सहयोग गर्नुहुन्थ्यो ।
जिवनमा कहिल्यै यदि म महिला नभईदिएको भए अझ सहज हुन्थ्यो, हिसांमा परेका तथा महिला भएकै कारण पछि हुनुपरेका त्यस्ता तिता क्षणहरु आए की आएनन ?
त्यस्तो क्षण निश्चय नै आउछ, जागिर खान भनेर महिला घर छोडेर हिडेपछि त्यस्तोे क्षण हर महिलालाई आउछ मलाई पनि आयो । बालबच्चाको स्याहार सुसार एउटा आमाले जत्ति राम्रोसगँ अरुले गर्नै सक्दैनन, बच्चाहरुलाई हेर्नुपर्ने, अफिसमा स्तनपान कक्ष हुदैनथ्यो । दुध चुसाउन समस्या हुन्थयो ।
घर र अफिसको दरी टाढा निरन्तर बच्चालाई दुध चुसाउन जान पनि नमिल्ने, घरपट्टि समय दिदाँ जागिरलाई पुरै समय दिन नसकेका र जागिरमा समय दिदाँ बालबच्चाको रेखदेखमा कमि भयो कि भन्नो लागिरहन्थ्यो ।
बिषेशगरी पैशुति ताका हर कामकाजी महलिालाई समस्या आउछ । अर्को भनेको महिला हिसांका घटना । अझैपनि नेपाली समाजमा महिला हिसांका घटना निरनतर सुनिन्छन् । त्यस्ता आईपर्ने सक्ने जोखिमहरुलाई महिलाले बुद्धिमतापुर्वक आफ्नो अधिकार केहो भन्नो बुझेर पार पर्नेपर्छ जस्तो लाग्छ । मेरो आफ्नो कुरा गर्नुपदाँ बैकंमा जागिर गर्ने सबै शिक्षित नै हुन्छन् । त्यसैले पनि होला मैले त्यस्ता घटनाको सामना गर्नुपरेन ।
महिला आत्मनिर्भर हुँदा केही सहज र नहुँदा अप्ठयारो हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
म यसमा सय प्रतिशत नै सहमत छु । महिलाहरु सम्मानित हुने भनेकै स्वनिर्भरताले हो । मान्छेहरुले पैसालाई सम्मान गर्छन जब उनिहरु आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र हुन्छन्,तव उनिहरुलाई सम्मान पनि छुट्टै किसीमको मिल्छ ।
महिलाहरुले आयआर्जन गरेको रमक खर्च गर्ने भनेको घर व्यवस्थापन, छोराछोरीको पालनपोषण शिक्षा नै उनिहरुको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ ।
उनिहरुको व्याक्तिगत आवश्यकता पनि पुरा गर्दै घर चलाउन पनि श्रीमानलाई धरै सहयोग गरीरहेका छन् । त्यसैले महिला आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन त अत्यन्तै जरुरी छ ।
तपाई पनि बिहे पछि बल्ल बैकंमा प्रवेश गरेर आज नेपाल राष्ट्र बैकंको डेपुटी गभर्नर बन्नुभयो । तपाईले जस्तै बैकंमा करियर बनाउन चाहेका तर विहे पछि बालबच्चा हेरेर घरमै बसेका शिक्षित गृहिणीहरुलाई तपाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
यसमा मैले अघि पनि भने महिलालाई परीवारको सपोर्ट भएन भने चुनौति हुन्छ । चुनौति हुने भएरै उहाँहरु घरमा सिमित हुनुभो दुई तिर नै ब्यालेन्स मिलाउन एकदमै चुनौति छ । घर र जागिर गर्ने महिलाले चुनौति भोग्नै पर्छ चुनौति हुदैन भन्ने कुरै हुदैन । पुरुषको तुलनामा महिलालाई फिजिकल र पारिवारीक दायित्पका कारणले धेरै चुनौति छ । सवैचन्दा पहिला परीवारको हौसला र सपोर्ट भन्छु मत अनि बल्ल महिलाको मेहनत हो । धरमै बसेका शिक्षित महिलाहरुले मेहनत त गर्नुभो तर परीवारले सपोर्ट गर्नुभएन र घरमा सिमित हुनुभो । बैकंमा करीयर बनाउन चाहाने महिलाले निरन्तर मेहनत गर्नुपर्यो, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अलि टाठो पनि हुन पर्यो अनि धैर्यता पनि हुनुपर्यो अहिलेका मान्छेहरुमा सवैभन्दा कमजारी पक्ष भनेको उनिहरुले कुर्न सक्दैनन् जे को पनि तत्कालै प्रतिफल चाहान्छन् । त्यो सम्भव हुदैन र यदि पाईहालेपनि टिकाउ पनि देखिदैन ।
म नेपाल राष्ट्र बैकंमा प्रवेश गर्दा सुरुमा सहायक अधिकृतमा नाम निकालेर सेवामा प्रवेश गरे । सुरुमा प्रवेश गर्नका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा भनिन्छ त्यसपछि अन्य तहमा बढुवा हुन आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हरेक तहमा बढुवा हुनका लागि परीक्षा दिएर पास भएरै बढुवा हुने हो । म पनि आन्तरिक परीक्षा दिएर पुरुष साथीहरुसगँ आन्तरिक खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेरै यहाँ सम्म आईपुगेको हो । म कहिपनि फेल पनि भईन र दोश्रो पटक परीक्षा पनि दिन परेन । मैले जिवनमा कहिँपनि कोटा तथा आरक्षणको फाईदा लिईन । हाम्रो पालामा आरक्षण कोटा थिएन र यदि भएको भए पनि म आरक्षण कोटाबाट नभै खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्धारा लडने थिए ।
भनेको महिला आरक्षण त्यति राम्रो होइन भन्न खोज्नुभएको हो?
सुरुमा कुनै सस्थामा प्रवेश गर्नका लागि त महिला आरक्षण कोटा ठिकै पनि हो तर भित्र छिरिसकेपछि बढुवामा भने आरक्षण लिनु राम्रो होईन जस्तो लाग्छ किनभने माथिल्लो तहमा पुगेपछि त्यहाँ त आफुले काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । मेहनत गर्ने वानी वसाल्नुपर्यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्यो आरक्षणले त्यो क्षमता दिदैन जस्तो लाग्छ । त्यसैले सघै आरक्षण खोजेर वस्नु हुदैन । पछि कलिा पनि धेरै मात्रामा आउन थालेपछि महिला पुरुषको सण्ख्या बराबर हुन थालेपछि आरक्षण हटाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धामै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । बरु शिक्षामा आरक्षण दिनुपर्छ ।